चीनले सित्तैमा रेल दिँदैन : डा. महेश मास्के. Break n Links: Media for all - Across the globe
घुस लिएको आरोपमा यातायातका अधिकृतसहित चार जना पक्राउ
चीनले सित्तैमा रेल दिँदैन : डा. महेश मास्के
चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्किसकेका छन् । यो भ्रमणको पृष्ठभूमि र उपलब्धिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो समयमा विदेशमन्त्रीको भ्रमण हुनु धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण छ । म राजदूत भएका वेलामा दुई पक्ष बसेर मन्त्रीस्तरमा कुरा गर्ने कार्यको थालनी भएको थियो । तर, अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण हुने सम्भावना बढेको हुनाले विदेशमन्त्रीको भ्रमणले एक किसिमले परोक्ष रूपमा त्यसकै तयारीका लागि पनि हो कि भन्ने ठाउँ दिन्छ ।
राष्ट्रपति सी जिनपिङ आएपछि नेपाल र चीनको सम्बन्ध अर्काे उचाइमा जानुपर्छ, त्यो सामान्य भ्रमणजस्तो हुँदैन । त्यसकारण विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई पनि त्यही अर्थमा लिनुपर्छ । राष्ट्रपतिको भ्रमणमा केमा हस्ताक्षर गर्ने ? नेपालको चाहना के–के मा हो ? चीनले पनि वास्तविक सहकार्य गर्ने केमा हो भन्ने एक ठाउँमा मिल्नुप-यो । त्यसका लागि मलाई लाग्छ, सबैभन्दा उपयुक्त व्यक्ति वाङ यी नै हो । त्यसकारण उनको नेपाल भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका संकेतहरूचाहिँ देखिन्छन्, त्यसबारेप्रस्ट रूपमा नबोलिए पनि ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा हाम्रो प्राथमिकता के हुनुपर्छ त ?
राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भावित भ्रमणका लागि के–के कुरा मिल्ने वा टुंग्याउने भन्ने महत्वपूर्ण हो । यसको एउटा पृष्ठभूमि छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाने वेलामा धेरै चर्चा–परिचर्चा भएका थिए । त्यतिवेला बिआरआईअन्तर्गतको प्रोजेक्टमा नेपाल पक्षले थुप्रै प्रस्ताव राखे पनि पछि त्यसलाई ९ वटामा ल्याइएका थिए, त्यसमा ४ वटा त सडकमार्ग, १ रेलमार्ग, १ क्रस बोर्डर विद्युत् लाइन जोड्ने र दुईवटा जलविद्युत् प्रोजेक्टहरू थिए ।
त्यतिवेला पारवाहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु एउटा उपलब्धि थियो । तर, बाँकी कुरा उहाँको (सीको) भ्रमणका लागि थाती राखिएको हुन सक्छ भन्ने एउटा अनुमान छ । त्यसकारण त्यहाँ अलरेडी एउटा प्याकेज छँदै छ । त्यतिले मात्र नभएर नेपालले चीनसँगको सहकार्यमा हामीलाई फाइदा हुने कुरामा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । म जति वेला त्यहाँ (राजदूत) थिएँ, प्रम केपी ओलीले १० वटा सम्झौता र १५ बुँदे जोइन्ट–स्टेटमेन्ट भएको छ । त्यसमा अलि ओझेलमा परेको क्रस बोर्डर इकोनोमी हो । त्यसको मुख्य जोड कनेक्टिभिटी थियो ।
सबै सार्वजनिक यातायातमा ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ को स्टिकर टाँसिने
भलिबलमा नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता, माल्दिभ्सलाई हराउँदै नेपाल सेन्ट्रल जोन च्याम्पियन